CeleLove - Page 170 of 179 - Welcome From Cele Love
December 1, 2018 Cele Love 0
တစ်စုံတစ်ယောက်ကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ချစ်ခဲ့ပြီးမှ မေ့ပစ်လိုက်ဖို့ဆိုတာ အရမ်းခက်ခဲမှန်း ကြုံဖူးတဲ့သူတိုင်း သိကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း လောကမှာ လိုချင်တိုင်းလည်း မရခဲ့တဲ့အချိန်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဘယ်လောက်ထိပဲ ချစ်ခဲ့ချစ်ခဲ့ စွန့်လွှတ်သင့်တဲ့ အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါ စွန့်လွှတ်တတ်ဖို့ကလည်း အရမ်းကိုအရေးကြီးပါတယ်။ ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ အရမ်းချစ်ခဲ့ဖူးတဲ့သူတစ်ယောက်ကို အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မဖြစ်မနေ မေ့ပစ်ဖို့လိုလာပြီဆိုရင် ဒီအချက်လေးတွေကို သတိရပြီး […]
သင်ဇာဝင့်ကျော် သို့ တရားဝင်မေတ္တာရပ်ခံခြင်း ဆိုတဲ့ စာတစ်စောင်ပါ ။ သို့/ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်မသဉ္ဖာဝံ့ကျော်သို့ တရားဝင်မေတ္တာရပ်ခံခြင်း မသဉ္ဖာ ဝံ့ကျော်ရဲ့ အင်တာဗျူးအဖြေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှ fb usersမြောက်များစွာကြည့်ရှုဖတ်ကြရပါတယ် မသဉ္ဖာဝံကျော်ရဲ့အဖြေမှာ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမို့လွတ်လပ်စွာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အဖြေကိုကျနော်ကြားလိုက်ရပါတယ် Democracy ဆိုတာ Responsibility ဆိုတဲ့ တာဝန်ယူမှုနဲ့တွဲထားရပါတယ် Democracy ဆိုတာ Responsibility ဆိုတဲ့ […]
ကဲ အမျိုးသားတို့ရေ ချစ်သူက နှုတ်ကနေ ဖွင့်မပြောပေမယ့် သင့်ကို သိစေချင်တဲ့ အရာလေးတွေရှိနေပါတယ်။ ဘာတွေလဲဆိုတာသိရအောင် ပြောပြပေးမယ်။ ၁။ ကျား၊ မ မခွဲခြားစေချင်တဲ့အကြောင်း။ ဒီကနေ့ခေတ်မှား အမျိုးသမီးတွေလည်း အမျိုးသားတွေနဲ့ တန်းတူ အလုပ်လုပ်နေကြပြီနော်။ သင့်ချစ်သူ မိန်းကလေးကလည်း သင့်ကို ကျား၊ မ ခွဲခြားတတ်တဲ့သူမျိုး […]
အနုပညာကြေးထဲကနေ အမြဲမပြတ်အလှူလုပ်တတ်တဲ့ မိုးပြည့်ပြည့်မောင်
November 30, 2018 Cele Love 0
မိုးပြည့်ပြည့်မောင်က သူ့ရဲ့အနုပညာအလုပ်ကို နဖူးကချွေး ခြေမ ကျတဲ့အထိကြိုးစားပြီးရလာတဲ့ အနုပညာကြေးတွေကို အလှူအတန်း လုပ်ရ တာ ဝါသနာပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူ ခံယူထားတဲ့ ပရဟိတအကြောင်းတွေကိုလည်း ပရိသတ်သိအောင် မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်မိုးပြည့်ပြည့်မောင်က ဖျော်ဖြေရေးတွေ၊ ရိုက်ကူးရေးတွေနဲ့ ခရီးတွေသွားရတဲ့အခါ ရောက်တဲ့နေရာတိုင်း တက်နိုင်သလောက် အလှူအတန်းတွေလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီလို […]
မန္တလေးတောင်ပေါ် စက်လှေကားအမြင့်မှ အမျိုးသားတစ်ဦး Selfie ရိုက်ရာမှ ပြုတ်ကျသေဆုံး။
မန္တလေးတောင်ပေါ် စက်လှေကားအမြင့်မှ အမျိုးသားတစ်ဦး Selfie ရိုက်ရာမှ ပြုတ်ကျသေဆုံး။ မန္တလေး နိုဝင်ဘာ ၃၀ မန္တလေးတောင်တော်ပေါ်တွင် ယနေ့ နိုဝင်ဘာ(၃၀)ရက် မွန်းလွဲ(၁)နာရီ(၄၅)မိနစ်အချိန့်က အမျိုးသားတစ်ဦး တောင်ပေါ်သို့ စက်လှေကားဖြင့် ဘုရားဖူးရန် တက်ရောက်ပြီး စက်လှေကားအပေါ်ဆုံးသို့ အရောက်တွင် လက်ကိုင်ဖုန်းဖြင့် Selfieရိုက်ရာမှအရှိန်လွန်၍ ပြုတ်ကျသေဆုံးမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ် ။ […]
နေနော်ဟာ သရုပ်ဆောင်နေတိုးက ရိုက်ကွင်းပေါ်မှာ ကာရိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး သင်ကြားပြသပေးတဲ့အကြောင်းကို ပြောပြ လာပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ လက်ရှိ အနုပညာလောကမှာ အောင်မြင်မှုမှတ်တိုင်ရဖို့ ကြိုးစားနေသူဖြစ်ပါတယ်။ နေနော်က ပရိသတ်အားပေးလက်ခံတဲ့ မင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေသူဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ စီနီယာသရုပ်ဆောင် တွေနဲ့ အတူ ဇာတ်ကားတွေရိုက်ကူးနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအထဲကမှ သရုပ်ဆောင်အကယ်ဒမီ နေတိုးနဲ့ ဇာတ်ကားရိုက်ကူးခဲ့စဉ်က […]
မော်ဒယ် စူးရှထက်နဲ့ အစ္စဏီရဲ့အမှုဟာဆိုရင် အမှုစတင်စစ်ဆေးနေချိန်ကနေ အခုထိ အချိန်အားဖြင့် ခုနစ်လခန့်ကြာမြင့်လာပြီဖြစ်ပြီး နှစ်ဖက်စလုံးကငွေကုန်လူပန်းဖြစ်နေကြပြီလို့ပြောရမှာပါ။ ဒါ့အပြင် နှစ်ဖက်စလုံးရဲ့ပရိသတ်တွေကလည်း ရှည်ကြာနေတဲ့အမှုအတွက် စိတ်ပူစိုးရိမ်နေကြပြီဖြစ်သလို အစ္စဏီကလည်း မြန်မြန်အမှုပြီးချင်နေပုံပေါ်ပါတယ်။ မနေ့က နိုဝင်ဘာလ 29 ရက်နေ့မှာ အစ္စဏီကို ထပ်မံရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ရာမှာ တရားလိုပြသက်သေကိုပယ်ဖျက်ပေးဖို့ စူးရှထက်က တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် ။ […]
ကလေးမွေးပြီးသွားတဲ့ မိန်းမက ဘယ်လောက်တန်သလဲ….? ( ကျော်မသွားပါနဲ့နော်)
ကလေးမွေးပြီးသွားတဲ့ မိန်းမက ဘယ်လောက်တန်သလဲ ….? ( ဖတ်​ကြည့်​ပါ ) ကလေးမွေးပြီးသွားတဲ့ မိန်းမက……ဖတ်​ကြည့်​ပါ ဘယ်လောက်တန်သလဲ ?????? လောကကြီးမှာ မိန်းမတော်တော်များများက မိမိရင်သွေးလေးတွေ ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာ မွေးဖွားကြီးပြင်းလာဖို့အတွက်နဲ့ ကိုယ်ဝန်စဆောင်ချိန်ကစပြီး လုပ်နေကြလုပ်ငန်းတွေ ရပ်ပစ်လိုက်ရတယ်… သန္ဓေသားအထိအခိုက်မရှိရအောင် (၉)လကျော်မျှ ဂရုတစိုက်စိုက်နဲ့ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရင်း ခက်ခက်ခဲခဲ ပင်ပင်ပန်းပန်းနေထိုင်ရတယ်… […]
ဗေဒင်ပညာဆိုတာကတော့ နိုင်ငံအသီးသီးမှာ ယနေ့အချိန်ထိတည်ရှိနေပြသေးသလို တစ်နိုင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးလည်းဟောပြောနည်းတွေကတော့မတူပါဘူး ။ ထို့အတူပဲ တရုတ်နိုင်ငံက ဗေဒင်ဟောဆရာတစ်ဦးရဲ့ ဟောပြောနည်းပုံစံကတော့ အခြားသူတွေထက် အနည်းငယ်ထူးခြားလို့နေပါတယ် ။ သူဟောပြောတဲ့ပုံကတော့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ရင်သားကို လက်နဲ့စမ်းသပ်ပြီးဟောပြောတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီအဘိုးအိုဟာ အခုလိုဟောပြောနိုင်ဖို့အတွက် သူ့ဘဝသက်တမ်းတစ်ဝက်လောက်ထိကို အချိန်ပေးကာ ကြိုးစားပြီးလေ့ကျင့်ခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ် ။ သူဗေဒင်ဟောဖို့အတွက် […]
အောင်လ ရဲ့ ချန်ပီယံ ခါးပတ်ကို လုယူသွားမယ်လို့ ပြောဆိုလိုက်တဲ့ ဗီရာ…
အောင်လ အန်ဆန်း ရဲ့ Light Heavyweight ချန်ပီယံ ခါးပတ်ကို လုယူသွားမယ်လို့ ပြောဆိုလိုက်တဲ့ ဗီရာ….. အသက် 41 နှစ် အရွယ် ရှိပြီ ဖြစ်သော်လဲ မကြာသေးခင် ကမှ MMA လောကကို ပြန်လည် ၀င်ရောက် လာခဲ့ကာ ၊ ယခင် […]